समानान्तर Samanantar: September 2012
काठमाडौंका सडक ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताका लागि उपयुक्त छैनन्। तर, ह्विलचेयरमा हिँड्नेहरूले पनि प्रयोग त यही सडक गर्नुपर्छ। सडकको सुधार विस्तार गर्दा ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताको सुविधा पनि हेरिनुपर्छ भन्ने चेतना जगाउन शनिबार बिहान ९ बजे वाकाथोन ( पदयात्रा ) आयोजना गरिएको थियो। दरबारमार्गस्थित नाङ्लो रेस्टुराँ अगाडिबाट सुरु भएको वाकाथोनमा ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताहरूसँगै सेतो छडीवाफा, अपांगता नभएकाहरू सहभागी थिए। आयोजकहरू नै युवा भएकाले पनि हाेला युवा उपस्थिति उल्लेख्य थियो। युथ फर इन्क्लुसिव सोसाइटीको आयोजना र विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा भएको वाकाथोनमा बालबालिका र बृद्धहरूको समेत सहभागिता थियो। मुख्यसचिवलगायत केही सरकारी अधिकारी कार्यक्रमको थालनीमा उपस्थित भए तर सचिव कृष्ण ज्ञवाली चाहिँे निकै बेर हिँडेका थिए। सडकमा अपांगता भएकाहरू पनि हिँड्छन् भन्ने चेतना उत्पन्न गर्न थोरै नै भए पनि कार्यक्रम सफल भएको हुनुपर्छ।
मैले जापानमा १९९३ मा यस्तै कार्यक्रममा भाग लिने मौका पाएको थिएँ। जापानी समाज अपांगता हुनेहरूप्रति बढी नै संवेदनशील छ । तैपनि, त्यहाँ समेत जनचेतना जगाउने कार्यक्रम गरिनेरहेछ। म सहभागी भएको कार्यक्रमलाई उनीहरूले ह्विलचेयर फेयर भनेका थिए। अपांगता नभएकाहरू ह्विलचेयर प्रयोग गरेर सहरको एउटा पसलमा पुगेर किनमेल गर्ने कार्यक्रममा त्यहाँका मेयरलगायतका पदाधिकारी सम्मिलित थिए। हामी एउटा सुपर मार्केटमा गएका थियौँ। सडक जुलुसले ढाकेको थिएन। नियमित आवागमन बाधा नदिई मेलाको आयोजना गरिएको थियो। ह्विलचेयरमा जाँदा अगाडिबाट आउने मोटरसँग असाध्यै डरलाग्दो रहेछ। जापानमा बाटो काट्ने ठाउँ निर्धारित र सुविधाजनक थियो। तैपनि, त्यस दिन करिब एक किलोमिटर जति ह्विलचेयर गुडाउनु पर्दा मैले िवशेष अनुभव गरेको थिएँ।
यहाँको कार्यक्रममा भने अपांगता भएकालेमात्र ह्विलचेयर प्रयोग गरे। अरूले काठमाडौंको सडकमा ह्विलचेयर गुडाउनु पर्दा कस्तो सास्ती हुन्छ भन्ने अनुभव गर्न पाएनन्। त्यस्तै, सडकमा ब्यानर लिनेहरूले बाटो ढाकेर हिँडेकाले अरू सबारी चालक रिसाएका होलान् तर ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताप्रति तिनीहरू संवेदनशील नभएको प्रमाण तिनले बजाएको हर्नले दिइरहेको थियो। कार्यक्रमलाई अलिकति थप व्यवस्थित गर्न सकेको भए सम्भवतः यी दुवै उद्देश्य पूरा गर्न अर्थात् अपांगता नभएकालाई ह्विलचेयरको अनुभव र चालकहरूमा संवेदनशीलता जगाउन पनि सकिने थियो। जे होस्, यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर हुनसके भने पक्कै पनि समाजमा चेतना जाग्नेछ। त्यसले जनमत सिर्जना भएर राज्यमाथि दबाब पर्नेछ। अपांगता भएका व्यक्तिलाई सुविधा थप्दा धेरै खर्च लाग्छ भन्ने भ्रम छ। सडक पार गर्ने ठाउँमा राखिने संकेत बत्तीसँग ध्वनि संकेत पनि हुने हो भने दृष्टि कमजोर हुनेहरूलाई सुविधा हुन्छ। यसैका लागिमात्र त ठूलो खर्च हुँदैन। भित्री सडकहरूमा बाटो काट्ने ठाउँ छैन। दरबार मार्गमा ह्विलचेयरमा हिँड्नेले बाटो कसरी र कहाँ काट्ने? सडक पेटीमा सजिलै उक्लन मिल्ने गरी केही ठाउँमा रैम्प बनाउन त खासै धेरै पैसा चाहिँदैन। त्यसले अरू अशक्त बूढाबुढी, गर्भवती, बिरामीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। पैदल, ह्विलचेयर र साइकलका लागि पनि बाटो बनाउने हो भने मूल सडकबाट मोटर बढी गतिमा गुडाउन मिल्छ। भुइँमा विकल्प नदिई बाटो काट्न आकासे पुल बनाउनु अपांगता हुनेको उपहास गर्नुमात्र हैन अधिकार हनन गर्नु पनि हो। कार्यक्रममा राजनीतिक नेता देखिएनन्। यसले तिनको बौद्धिक स्तर देखाउँछ। अपांगता हुने नागरिकको संख्या १० प्रतिशत रहेको अनुमान छ। यति ठूलो समूहको उपेक्षा गर्नु राजनीतिक दलहरूका लागि निकै महंगो हुनसक्छ। जापानमा हामी जानुपर्ने भवनमा ह्विलचेयरमै डुलेर किनमेल गर्न सकिने सुविधा थियो। तर, त्यस भवनमा भर्खरै खुलेको बैंकको काउन्टर ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताको निम्ति सहज रहेनछ। सबैले त्यसमा आपत्ति गरे। धेरै खर्च लाग्ने हुनाले सुधार गर्न नसकिने उत्तर त्यसको व्यवस्थापनले दिएपछि ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताको संगठनले उनीहरूलाई चेतावनी दियो - एक साताभित्र त्यसलाई अपांग मैत्री नबनाउने हो भने हामी सबै अपांगता हुनेहरूलाई बैंकसँग कारोबार नगर्न आह्वान गर्छौं। नभन्दै, म त्यहीँ हुँदै त्यो काउन्टर भत्काएर ह्विलचेयरबाट नओर्ली कारोबार गर्न मिल्ने गरी बनाइयो।
मसँग आजको कार्यक्रममा मेरो नाति अभिज्ञ पनि थियो। उसको टिप्पणी - कार्यक्रम गरेको ठाउँ नाङ्लो रेस्टुराँ अगाडि पैदलबाटोमा सडकबाट उक्लन र सडकमा ओर्लन ह्विलचेयर प्रयोगकर्तालाई निकै गाह्रो भयो। कम्तीमा त्यहाँ त रैम्प बनाउनुपर्ने थियो नि !
Posted by Govinda at 9/29/2012 02:22:00 PM No comments:
Posted by Govinda at 9/28/2012 10:22:00 PM No comments:
बाल सखा दल
नेपालको अन्यत्रमात्र हैन, काठमाडौंमा पनि विद्यालयहरूको संख्या ज्यादै न्यून थियो। पढ्नुपर्छ र पढाउनुपर्छ भन्ने धारणा सबै तहमा विकास भइसकेको थिएन। त्यसैले पढ्ने उमेरका कतिपय केटाकेटी सडक र फोहोर गल्लीमा खेलेर एकअर्कामा तल्लो तहको गालीगलौज गरेर तथा कतिपय केटाकेटीहरू आफ्नो उमेर र बर्कतले भ्याउनेभन्दा बढी काम गर्न बाध्य भएर आफ्नो वर्तमान र भविष्यलाई एकसाथ नष्ट गरिरहेका थिए। यसबाट संवेदनशील भएर बीपी कोइरालाले नेपाली बालबालिकाको भविष्यलाई कसरी उज्ज्वल बनाउन सकिन्छ, त्यसका बारेमा सुवर्ण शमशेर र अरूहरूसित लामो छलफल गरे। त्यसको सबै जिम्मेवारी त्यसपछि धनमानसिंह परियारलाई दिइयो। परियारले यसबारेको योजना तयार पारे। बीपी र सुवर्णले परियारलाई बालबालिका बारेमो उनको योजनालाई अघि बढाउन सहर्ष स्वीकृति दिए। तदनुसार, २००८ को आश्विनमा धनमान सिंह परियारले 'बाल सखा दल'को गठन गरे। 'बाल सखा दल' को अध्यक्षमा परियार आफैँ रहेका थिए। यसको उद्देश्य बालबालिकाको सर्वांगीण हितलाई ध्यान दिएर उनीहरूलाई सक्षम र योग्य नागरिक बनाउने भन्ने थियो। परियारले उपत्यकाको तीनवटै स्थानमा विभिन्न विद्यालयहरूमा र विभिन्न टोलमा बाल सखा दलको शाखा खोले। .....उनले 'बाल सखा' भन्ने एक बालपत्रिकाको प्रकाशन पनि प्रारम्भ गरे। बाल सखा दलको तर्फबाट २००८ को माघ १७ गते वसन्त पञ्चमीका दिन काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरियो।
पुरुषोत्तम बस्नेत, नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारूप ( २०६५) पृ. ३९२ बाट
बालबालिकाको हितका लागि गरिएको यो पहलको बारेमा मलाई जानकारी थिएन। कसैले चर्चा गरेको पनि मैले थाहा पाएको थिइन। यसैले यति उद्धृत गर्ने लोभ लाग्यो।
Posted by Govinda at 9/26/2012 08:17:00 PM No comments:
Posted by Govinda at 9/25/2012 07:49:00 PM No comments:
जगदीश घिमिरेको उपन्यास सकस पढिसकियो । पढ्दा चाहिँ सकस भएन । यो भयो खुसीको कुरा । विमोचनमा वक्ताले निकै प्रशंसा गरेर अपेक्षा बढाएका थिए । त्यों चाहिँ पूरा भएन ।
सकस राम्रो आख्यान भने भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मैले निकै कम किताब पढेको छु । नेपाली आख्यानमा द्वन्द्वमा केन्द्रित पुस्तक त झन् थोरै पढेको छु । यसैले मैले आफूले पढेकोमा राम्रो मध्येको मात्र भन्नसक्छु ।
सकस पढ्दापढ्दा मैले केही वर्ष यता पढेका अंग्रेज़ी पुस्तक सम्झेँ । इस्माइल बेहको A long way gone ( बाल सैनिकको संस्मरण ), किरण देसाईको The inheritance of loss र J. M. Coetzee को Disgrace, उपन्यास । सकसलाई यिनीहरूसँग दाँज्न सकिने लाग्यो । सम्पादनका क्रममा निकै जना हस्तीहरूको नाम देखेपछि खोट खोज्ने आँट पनि आएन । सर्सर्ती पढ्दा केही तथ्यगत, केही सम्पादकीय त्रुटिले किरिकिरी लगाउँछन् । अर्कों संस्करणमा सच्याइएला नै । छिटै अर्को संस्करण पक्कै छापिन्छ ।
Posted by Govinda at 9/23/2012 10:40:00 AM 1 comment:
गुडविभ युएसएको न्युज लेटरमा सरस्वती चौधरीको सफलताको कथा लेखिएको रहेछ । सरस्वतीले युसेपमा मोटर साइकल मेकानिकको तालिम लिएका हुन् । अहिले साथीसँग मिलेर वर्कसप चलाउँदी रैछन् । एसिया फाउन्डेसन मार्फत् अमेरिका सरकारको सहयोगमा यो कार्यक्रम चलाइएको थियो । कार्यक्रम चलेका बेला संयोगले म रगमार्क र युसेप दुवै संस्थाको अध्यक्ष थिएँ । कार्यक्रम राम्रैसँग सकिएको थियो । केटीहरूले परम्परागत कामको साटो नयाँ सीप सिक्नुपर्छ भन्नेमा मेरो जोड हुन्थ्यो । नभन्दै केही चेलीहरू मेकानिकका रूपमा भएका राम्रो प्रगति गरेका छन् । खुसी लाग्यो । यस खुसीका लागि युसेप र रगमार्कका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक क्रमशः भुपेन्द्र गुरुंग र अजय कार्कीका साथै परियोजनामा संलग्न सबैलाई धन्यवाद ! माधुरीजीको सहयोग पनि स्मरणीय छ ।
त्यही सफलता अहिले पनि धेरैका लागि देखाउने र कमाउने माध्यम भइरहेको रहेछ । यो पनि हर्षकै विषय हो !
मा यो प्रसंग छ !
Posted by Govinda at 9/19/2012 07:12:00 AM No comments:
मुलुक संकटमा छ भन्ने सबैले मानेका छन्। संकट मोचनका लागि केही गर्ने निर्णायक क्षमता भने कसैको देखिएन। 'राष्ट्रपति रामवरण यादवले केही चमत्कार गरून् र आफूलाई नाफा हुनेगरी संकटबाट पार पाइयोस्' भन्ने चाहना राजनीतिका प्रमुख पात्रमा देखिएको छ। राष्ट्रपति यादवसँग निहुँ खोज्दै आएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि आफ्नो हितका लागि उनैलाई प्रयोग गर्ने मनःस्थितिमा देखिएका छन्।
संविधानसभा संविधानै नलेखी र अर्को उपाय पनि नखोजी भंग गराइयो। सर्वाेच्च अदालतले 'म्याद थप्न' नपाइने निर्णय गरेकै दिनदेखि पनि संविधान निर्माणलाई प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले प्राथमिकता दिएका भए समस्या टुंगिने थियो। त्यसपछि पनि उनीहरूले 'तरबार र घिउ' बेच्ने संस्कारभन्दा माथि उठेका भए संकट झन् गहिरो पक्कै जाने थिएन। यसैले नेताहरूविरुद्ध जनआक्रोश छ। मौन बहुमत राष्ट्रपतिले निकास दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छ। तर यो संगठित र प्रतिबद्ध छैन। यस्तै, निकास लोकतान्त्रिक र संविधानसम्मतै हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि व्यक्त हुने गरेको छ। राष्ट्रपतिले सरकार हटाए र त्यस अवस्थामा विरोध बढ्यो भने कसैले पनि साथ दिने छैनन्। एमालेको त यसै पनि कहिल्यै भर पर्नै हुँदैन। कटुवाल प्रकरणमा पनि त एमालेले त्यस्तै दोहोरो चरित्र देखाएको थियो। कांग्रेसमा पनि जनमत हेरेर लोकतन्त्र आंगमा चढ्नेहरू विरोधमा उत्रने छन्। संविधानसभामै पार्टीभन्दा ठूलो र माथि हुने रहर देखाउनेहरूले राष्ट्रपति यादवको विरोध गरेर 'लोकतन्त्रको मसिहा' देखिने रहर नगर्लान् र? बीपीले जस्तो 'एन्टी करेन्ट' उभिने आँट गर्ने र त्यसमा अडिने शक्ति भएको नेता अहिले कांग्रेसमा छैनन्। ( कांग्रेस त के देशमै छैनन्!।)
अर्कातिर राष्ट्रपति यादव स्वयं पनि बुद्धिजीवी भनिने अवसरवादी जमातजस्तै अलमलमा देखिन्छन्। 'राष्ट्रपतिले संकटको समाधान खोज्नुपर्छ' भन्नेमा लगभग सबै सहमत छन्। बुद्धिजीवी भन्नेहरू त्यस्तो समाधान अलोकतान्त्रिक नहोस् र संवैधानिक पनि होस् भन्ने रट लगाइरहेका छन्। संविधान यसबारे मौन छ। जनमत पनि देखिने गरेर कतै प्रकट भएको छैन। संविधानले शासन चलाउन राजनीतिक सहमतिको उपाय सुझाएको छ। तर, सत्तामा आँखा गाडेर दलगत र अझ बढी व्यक्तिगत स्वार्थको घेराबाहिर निस्कन नसक्ने नेताहरूले सहमतिको अर्थै बिगारिसकेका छन्। अनि कसरी निस्कन्छ निकास? सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने गरी के गर्ने राष्ट्रपतिले?
राष्ट्रपतिबाट अपेक्षा गरिएको निकास के हो? बाबुराम भट्टराईले मुलुक भड्खालैमा परे पनि सरकार छाड्दैनन् भन्ने त स्पष्टै भइसक्यो। उनलाई राष्ट्रपतिले हटाऊन् भन्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेताहरूको चाहना हो भने सार्वजनिकरूपमा त्यही भन्ने आँट गर्नुपर्‍यो! संस्थागतरूपमै प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई राष्ट्रपतिले बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेर जनमत प्रदर्शन गर्नुपर्‍यो। अहिले त भट्टराईलाई हटाउँदाको दोष र जोखिमचाहिँ राष्ट्रपति रामवरण यादव एक्लैले बेहोरून् तर त्यसपछि सत्तामा हामी गएर स्वाद फेरौँ भन्ने चाहना कांग्रेस र एमालेको देखिएको छ। (लोकतन्त्र त यी सबैको देखाउने दाँतमात्रै न हो।) त्यतिमात्र हैन, एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि लुच्याइँ गर्दैछन्। अरूले नै बाबुराम भट्टराईलाई हटाइदिए दलभित्र पनि उनलाई तह लगाउन सकिने थियो भन्ने दाहालको मनसाय लुकेको छैन। (धोबीघाट चक्रब्यूह तोड्न उनले देखाएको चतुर्‍याइँ निकै महंगो परिसकेको छ। मोहन वैद्यहरूले छाडेर गएपछि भट्टराई पार्टीमा झन् बलियो र दाहाल कमजोर भएका छन्। यसले 'समुद्री बूढो' ले सिनवादको घाँटी अँठ्याएजस्तै भट्टराईले पनि दाहालको बोझ बन्न छाड्ने लक्षण छैन। अरू दलका नेतासँग जे भने पनि दाहालले शायद अब भट्टराईलाई सोझै 'कुर्सी छाड' भन्ने आँट गर्नसक्ने अवस्था छैन।)
उपेन्द्र यादवले अलि स्पष्ट शब्दमा 'राष्ट्रपतिले दलका नेताहरूलाई बोलाएर चिया खुवाएर पठाउनेमात्र गर्नुहुँदैन। दलहरूले सहमति गर्न नसके संविधानको संरक्षकको हैसियतले राजनीतिक निकास दिन कडा कदम चाल्ने आँट गर्नुपर्छ' भनेका छन्। तर, त्यो 'कडा कदम' के हो भन्नेचाहिँ स्पष्ट भन्दैनन्। के बाबुरामलाई अपदस्थ गरेर राष्ट्रपतिले शासन हातमा लिनुपर्छ भनेका हुन्? हो भने राष्ट्रपतिले त्यसो गरेपछि हुने विरोधमा उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिलाई साथ दिन्छन्? भट्टराई र विजय गच्छदारहरूको गठबन्धनको आहारिस र कुण्ठाले मात्रै त उपेन्द्रले कडा कदम खोजेका हैनन्? राष्ट्रपतिले शासन गर्न खोजे वा भट्टराईको हातबाट खोसेर अरूलाई सुम्पे भने सत्ता नपाउनेले सहलान् र? उनले संविधान सभा पुनःस्थापना गरे भने त्यो पनि वैधानिक र लोकतान्त्रिक त हुँदैन।
छरितो चुनावी सरकार गठन गरेर संविधानसभाको निर्वाचनतर्फ बढ्नु अहिलेका लागि सर्वोत्तम उपाय हुन्थ्यो। त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई जनाधार भएको कुन पार्टीले साथ दिन्छ? छिमेकीले के भन्छन्? भारतले यादवभन्दा भट्टराईलाई रुचाउँछ जस्तो देखिन्छ। चीन त यसै पनि यादवका पक्षमा हुने छैन। यस्तोमा सेनाले पनि साथ देला/नदेला? (दोस्रो जनआन्दोलनको अन्त्यतिर ज्ञानेन्द्रलाई भारतीय निर्देशनमा सेनाले साथ नदिएपछि सम्पूर्ण परिदृश्य बदलिएको अहिल्यै त कसैले पनि बिर्सेका छैनन् होला।) भट्टराईका तुलनामा यादव बढी राष्ट्रवादी देखिएका छन्। लोकतन्त्रवादी त उनी हुँदै हुन्। यसैले विदेश, विशेषगरी भारत र चीनका लागि यादवभन्दा भट्टराई नै बढी प्रिय हुन सक्छन्।
बाबुराम भट्टराईको मूल ध्यान जसरी पनि सत्ता लम्ब्याउनुमै देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको दलका कार्यकर्ता र कृपापात्रले राज्यको ढुकुटी अपचलन गर्ने वैध/अवैध अवसर शायद यसभन्दा पहिले कहिल्यै कसैका पालामा पाएका थिएनन्। भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गराउने निर्वाचन पक्कै पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन। त्यसलाई रोेक्न राजनीतिक दलहरू बढी जागरुक र सक्रिय हुनुपर्छ। निर्वाचनमा हुने धाँधली रोक्ने पनि साहस र शक्ति नभए दलहरूले जनादेश लिने रहरै किन गर्नु? तर, संविधानसभा पुनःस्थापना गर्नेजस्ता गलत उपायमा सहमति जनाउनु लोकतन्त्रका लागि आत्मघाती हुनसक्छ। अहिलेको एउटा समस्या नेपाली कांग्रेसका नेताहरू लोकतान्त्रिक र राष्ट्रवादी हुन नसक्नु पनि हो। उनीहरूले सत्ता हैन, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्ष लिनेबित्तिकै भट्टराईमाथि दबाब चर्काउन सक्नेछन्। अहिले सत्ताको लोभ नगरी चुनावका लागि तयार हुनेबित्तिकै कांग्रेसले राजनीतिक बाजी मार्नेछ। चुनाव गराउन नसकेपछि वा चुनाव गराउनै नखोजेपछि त राष्ट्रपतिलाई भट्टराई हटाउन पनि सजिलो हुन्छ। त्यस अवस्थामा कांग्रेसका पक्षमा जनसमर्थन पनि बढ्नेछ।
संविधानसभा पुनःस्थापना हुनेबित्तिकै त्यसले खटाएको वा सहमति गरिएको विषयमा मात्र निर्णय लिन्छ वा लिनुपर्छ भन्नु लोकतान्त्रिक र व्यावहारिक हुँदैन। माओवादी र मधेसी दलहरूको बहुमत भएको संविधान सभाले सत्ता लम्याउन लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामाथि नै प्रहार गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई कसरी अवैध भन्ने? त्यतिबेला राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्छ? रोक्न सक्छन्? बरु, संविधानसभाकै लागि अर्को निर्वाचन गर्ने सहमति जनाउने हो भने बाबुराम भट्टराईमाथि सरकार छाड्ने दबाब बढ्दै जानेछ। उनको विपक्षमा वातावरण बन्दै गएपछि निर्वाचन गराउन नसकेको भनेरै पनि उनलाई हटाउन सकिनेछ। किनभने, भट्टराईको प्राथमिकता निर्वाचन हुँदै हैन। निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिन्थे भने उनले अहिले अध्यादेशको बाढी चलाउने थिएनन्। राजदूत वा न्यायाधीश ६ महिना नियुक्त नगर्दैमा मुलुकमा कुनै विध्वंश भइहाल्दैन। अहिलेको प्राथमिकता त राजदूत नियुक्ति वा कर्मचारीको सरुवा बढुवा होइन, राजनीतिक निकास हो।
बाबुरामहरूले जति सकिन्छ यो अन्योल लम्याउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन। उनीहरूलाई राज्य जति कमजोर हुन्छ, समाजको मनोबल जति गिर्छ र अराजकता जति बढ्छ, उति लाभ हुन्छ। बाबुराम भट्टराईले राज्यका सबै अंगमा नियन्त्रण गरेर शासन गर्ने आफ्नो रहर पटक पटक सार्वजनिक गरेका छन्। अराजकता बढी नै भएपछि जनमानसले दह्रो शासन खोज्छ। बाबुरामको रणनीतिक अभीप्सा शायद यही हो। यत्ति हो, त्यस अवस्थामा प्रकट हुने अधिनायक बाबुराम भट्टराईले गरेकै डिजाइनअनुसार नहुन पनि सक्छ। विधि नमानेपछि बल हुनेले शासन गर्ने हो। अहिले सबैभन्दा बलियो संगठित संस्था नेपाली सेना हो। बाबुराम भट्टराईभन्दा पनि भारत, चीन र नेपालकै पनि स्थायी संस्थापन भनिने तत्वका लागि नेपाली सेना बढी भरपर्दो हुनसक्छ। अर्थात्, अर्कै आवरणमा पञ्चायत दोहोरिन सक्छ। अनि लोकतन्त्रका लागि अर्को लडाइँ थालिनेछ।
मुलुकले लोकतन्त्रका लागि फेरि संघर्ष गर्न नपरोस् भन्ने हो भने तत्कालै केही गर्ने बाध्यता राष्ट्रपति यादवलाई छ। अर्थात्, एकपल्ट फेरि राष्ट्रपति रामवरण यादव सत्ता संघर्षमा निस्किएको 'हलाहल' पिएर 'नीलकण्ठ' बन्नुपर्ने अवस्थामा देखिएका छन्।
Posted by Govinda at 9/18/2012 02:14:00 PM No comments:
बन्दले मुलुकलाई बर्बाद पारिसक्यो । एक दिनको बन्दले हुने आर्थिक - सामाजिक क्षतिको लेखाजोखै गर्न सकिन्न । त्यति जान्दाजान्दै पनि राजनीतिक दलहरू, तिनका भातृसंस्था बन्द गर्न उद्यत भइहाल्छन् । तिनैको देखासिकी गरेर अरू पनि बन्द गर्नु अधिकारै हो भने झैँ गर्छन् ।
बन्द शान्तिपूर्ण विरोधको अन्तिम चरणमा अपनाइने उपाय हो । बन्द आह्वानकर्ताले बल प्रयोग नगरेमात्र जनसमर्थन रहे नरहेको थाहा हुने हो । नेपालमा त बन्द आह्वान गरेपछि जनतालाई तर्साउन राँके जुलुस निकाल्ने, बन्दको अवज्ञा गर्नेलाई हातपात गर्ने, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोड़फोड़ गर्ने सामान्य चलन र बन्दकर्ताको अधिकारजस्तो पो भएको छ ! राजनीतिमा बाहुबली र बन्दुकेको प्रभुत्वसँगै बलपूर्वक बन्द गराउने चलनले सीमा नाघिसक्यो । अब पनि बन्दका विरुद्ध नबोले बोल्नै नपाउने दिन आउनसक्छ !
संविधान सभाको चुनावपछि बलपूर्वक बन्द गर्नेहरूलाई बहिष्कार गरौँ । तिनलाई आगामी चुनावमा भोट नदिने प्रण गरौँ । सन्तानको भविष्य र आफ्नो स्वतन्त्रताको रक्षा गरौँ !
Posted by Govinda at 9/14/2012 05:35:00 PM No comments:
दी न्युयोर्क टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा गएको सोमबार एउटा ब्लग प्रकाशित भएको छ। ब्लगर माशा गेसेन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनकी आलोचक हुन्। उनले 'आकारविहीन व्यक्ति' (The Man WithoutaFace) शीर्षकमा पुटिनको जीवन पनि लेखेकी छन्। प्रसंग रोचक र सान्दर्भिक लागेकाले केही अंशको अनुवाद र उद्धरण प्रस्तुत गरेको छु।
माशा लेख्छिन् - 'संसारकोपुरानो मध्येको लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाको सम्पादकको जागिर गुमाउने काम मैले सोचेभन्दा छिटो र कम पीडादायी भयो। मेरो जागिर खोसिने कार्य कसरी होला भनेर मैले केही महिनादेखि सोच्दै आएकी थिएँ।'
पत्रिकाको प्रकाशकले केही महिना पहिले रसियन जोग्राफीकल सोसाइटीसँग साझेदारी गरे । सो सामान्य लाग्ने घटना रुसमा भने बिस्तारै व्यवसाय हात पार्ने उपाय रहेछ। रसियन जोग्राफीकल सोसाइटी भ्यादिमिर पुटिनको अध्यक्षतामा रहेको गैरसरकारी संस्था हो। मासाका अनुसार यसको अर्थ हुन्छ यसले जे चाह्यो त्यो हुन्छ। यसको कार्यालय क्रेमलिन नजिकैको चार तले घरमा रहनुलाई उनले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्। यस वर्षको सुरुमा रसियन जोग्राफीकल सोसाइटीका हाकिमहरूले रुसको सबैभन्दा बढी वितरण हुने पत्रिका भोक्रुग स्वेतामा अधिकार जमाउने निर्णय गरेपछि प्रकाशकले खुरुक्कै पत्रिकाको आवरणमा रसियन जोग्राफीकल सोसाइटीको पत्रिका भन्ने छापे। प्रकाशकको स्वामित्व नाममात्रको भयो तर आर्थिक दायित्व भने पूरै उनैको रह्यो रे। पत्रकारहरू रसियन जोग्राफीकल सोसाइटीका रमाइलो र खर्चिलो अभियानहरूमा जान थाले। माशा भने अलि अप्ठेरोमा परिछन्। एकातिर नयाँ नयाँ ठाउँमा संवदाता पठाउन पाइने तर अर्कातिर अभियानको उद्देश्य भने थाहै नहुने । उनका अनुसार पैसा खर्च गर्न पाइने भएकाले खर्च गर्नेबाहेक अरू कुनै तर्क उनले भेटिनन्। उनलाई चिन्ता लागेको अर्को विषय चाहिँ पुटिन आफैँ रसियन जोग्राफीकल सोसाइटीका प्रकृति संरक्षणका कार्यक्रमहरूमा बढी अग्रसर हुनु पनि रहेछ। माशा लेख्छिन् - ' सन् २००८ मा पुटिनले आफैँ जंगली साइबेरियन बाघलाई स्याटेलाइट ट्रान्समिटर राख्दै गरेको देखाइएको थियो। यथार्थमा वातावरणवादी ब्लगरले पछि लेखेअनुसार त्यो बाघ खबरोवस्क चिडियाखानाबाट लगिएको थियो।' माशाका अनुसार भोक्रुग स्वेताका पत्रकार रसियन जोग्राफीकल सोसाइटीका कार्यक्रममा बढी जान थालेपछि यस्ता कथा पनि धेरै थाहा हुन थाल्यो। सन् २०१० मा पुटिनले हिउँ भालुमा स्याटेलाइट ट्रान्समिटर राखे। तर स्थानीय व्यक्तिहरूका अनुसार त्यो भालु धेरै दिन पहिले समातिएको थियो र पुटिनको भ्रमणभन्दा पहिले नै लठ्याइएको थियो। माशाले पुटिनका पाखण्डहरूको अरू पनि उदाहरण ब्लगमा लेखेकी छन्।
ब्लगको अन्त्यतिर माशा लेख्छिन् - एक साता अगाडि शनिबार प्रकाशकले फोन गरे। साइबेरियन क्रेन (सारस) लाई जंगलमा छाड्ने कार्यक्रमको समाचार संकलनका लागि संवाददाता पठाउन राष्ट्रपतिको कार्यालयका कर्मचारीले भनेका छन्। पुटिनले सारसहरूलाई ग्लाइडरबाट बाटो देखाउने छन्। पहिलेजस्तै कुनै पाखण्ड हुने हो भन्ने मलाई लाग्यो। त्यस्तो भयो र थाहा पाइयो भने त्यो समाचार पनि लेख्नुपर्छ। त्यस अवस्थामा मेरो जागिर त जान्छ। त्यसैले मैले संवाददाता पठाउँदिन भने। तर मेरो जागि त उति नै बेला चट् भयो।
माशा लेख्छिन् - 'एक प्रकारले सन्चै भयो। रसियन जोग्राफीकल सोसाइटी साझेदारका रूपमा भित्रिएपछि जागिर जान्छ भन्ने त मलाई पहिल्यै लागेको थियो। त्यो घटनाको समाचार दिन नपाएकोमा भने मलाई पछुतो भइरह्यो। मलाई आफैँ जाने मन थियो। दुई दिनपछि जीवशास्त्रका विद्यार्थी र संरक्षण स्वयंसेवक एक जनाले पुटिन अभियानमा प्रयोग गरिएका चरा कार्यक्रम स्थलसम्म ल्याउनु पर्दा दुईवटा मरेको समाचार ब्लगमा लेखिन्। यो समाचार खुब छिटो फैलियो। पछि उनले आफूले विवाद बढाउन नखोजेको स्पष्टीकरण दिइन् र 'पुटिनले नै मारेका त हैनन् नि!' भनेर पन्छिइन्। माशा अन्त्यमा लेख्छिन् - 'त्यहाँ साँच्चै के भएको हो मलाई थाहा छैन। दुर्भाग्यवश, म त्यहाँ हुन पाइन।'
पाखण्डी पुटिन र तिनका गुलामहरू जताततै छन्। त्यसैले माशाहरू पनि हुन्छन्।
तैपनि, पढ्न रमाइलै छ हैन?
Posted by Govinda at 9/13/2012 02:25:00 PM 1 comment:
सुन्धारास्थित सिभिल मलमा सामसुङको पसलबाहिर बुधबार टीभी हेर्दै दुई बालक । तन्देरी भएपछि यी बालक टीभी हेर्न पाएकोमा खुसी भइरहलान् कि यसरी हेर्नु परेकोमा रिसाउलान् ?
Posted by Govinda at 9/13/2012 01:00:00 PM No comments:
आँबु गाउँको यही घरमा मेरो बा पनि जन्मनु भएको हो । म पनि यही घरमा जन्मेको हो । ढुंगाले छाएको चाहिँ २०२० सालतिर हो । मैले यो तस्बिर २०२५ सालतिर खिचेको हुँ । आँबु गाउँ आँबु खैरेनीको गाउँ हो । पुरानो कोटले छेकेको ठूलो रमाइलो गाउँ छ ।
दलानमा देखिएको झ्यालबाट गाउँ निकै रमाइलो देखिन्थ्यो । दसैँका बेला गाउँमा तोरी फूलेको हुन्थ्यो । जूनको टकमा देखिने दृश्यको मोहकता वर्णन गर्नै नसकिने हुन्थ्यो ।
Posted by Govinda at 9/12/2012 09:41:00 PM No comments:
रामराजाप्रसाद सिंह पञ्चायतकालमा दुई पटक चर्चामा आए - पहिलो पटक राष्ट्रिय पञ्चायतका लागि स्नातक निर्वाचन क्षेत्रबाट उमेदवारी दिएर र दोस्रो पटक नेपाली कांग्रेसको सत्याग्रह शिथिल तर सफल हुनै लागेका बेला बम पड्काएर। दुवै पटक काठमाडौंमा उनलाई रहस्यमय बनाइएको थियो। पछिल्लो घटनाका बारेमा थाहा पाउने अझै धेरै नै छन्। विवाद पनि छ। यसैले राष्ट्रिय पञ्चायतमा उनी उमेदवार भएको, जितेको, शपथ ग्रहण गरेको, निष्कासित गरिएको र पञ्चायतभित्र त्यति बेला उत्पन्न विवादका सम्बन्धमा देखे सुनेका कुरा लेख्ने जमर्को गरेको छु। नेपालको संविधान, २०१९ को २०३२ सालमा संशोधन नहुँदासम्म स्नातक र वर्गीय संगठनहरूबाट पनि राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य निर्वाचन हुन्थ्यो। त्यस्तो निर्वाचनमा देशभर मतदाता हुन्थे। स्नातक निर्वाचन मण्डलमा सदस्य हुन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि पाए पुग्थ्यो। देशमा अधिकांश स्नातक सरकारी कर्मचारी थिए तर स्नातक निर्वाचन क्षेत्रबाट भने पञ्चायत विरोधी वा विपक्षी राजनीतिसँग निकट व्यक्तिहरू निर्वाचित हुन्थे। विसं २०२८ को निर्वाचनमा स्नातकबाट रामराजा पनि उमेदवार बने। रामराजाको उमेदवारीले कांग्रेस समर्थकहरूमा हलचल मच्चियो। नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्णकालीन नेताहरू सायद पार्टीको आधिकारिक लाइनका कारण अो कि निर्वाचनमा संलग्न हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्थे। अरू धेरै समर्थकहरू भने रामराजाको आकर्षक नाराका कारण हो कि उनका पक्षमा स्वतःस्फूर्त परिचालित भएका थिए। विजय भट्टराईका कारण मैले पनि त्यसबारे थाहा पाएको थिएँ। उनी त्यतिबेला शाखा अधिकृत भइसकेका थिए तर कांग्रेसी राजनीतिमा पनि सक्रियतापूर्वक संलग्न थिए। संस्कृत छात्रावासका विद्यार्थीहरूमा उनको राम्रो प्रभाव थियो। मुक्ति पण्डितहरू रामराजाको प्रचारमा लागेजस्तो लाग्छ। पञ्चायतविरुद्ध उमेदवारी दिएकाले रामराजालाई जिताएर राजा र संसारलाई नेपालका वुद्धिजीवी पञ्चायतका पक्षमा छैनन् भन्ने देखाई दिनुपर्छ भन्ने तर्कमा धेरैको चित्त बुझेको थियो। नभन्दै चुनावमा विजयी चार जनामा रामराजा पनि परे। उनलाई राष्ट्रिय पञ्चायतको शपथ ग्रहण गर्न दिनुपर्ने र दिन नहुने पक्षमा पञ्चायतभित्र चर्कै विवाद भएको थियो। रामराजालाई काठमाडौं आउन नदिन कडा सुरक्षा बन्दोबस्त सरकारले मिलाएको थियो। अकस्मात्, रामराजा काठमाडौं आइपुगे। रुद्रप्रसाद गिरि मन्त्री थिए। उनैमाथि रामराजालाई काठमाडौं ल्याएको आरोप एउटा पक्षाले लगाएको थियो। राजाले हस्तक्षेप गरेपछि रामराजाले शपथ ग्रहण गर्न पाए। तर, त्यसपछि महाभियोग लगाएर उनलाई राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यताबाट हटाइयो। रामराजाको रिक्त स्थानमा पुनः निर्वाचन भयो र त्यसमा काठमाडौंकी महिला निर्वाचित भएकी थिइन्। रामराजा काण्ड केही दिनमा सेलायो तर त्यसपछि राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्नातक क्षेत्र र वर्गीय संगठनबाट प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था पनि हटाइयो। यस काण्डसआग जोडिएको एउटा उल्लेखनीय घटनाको भने खासै चर्चा भएन। रामराजाको निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पूर्णप्रसाद 'ब्राह्मण'ले पनि राजीनामा गरेका थिए। उनलाई दरबारबाट रामराजालाई मतगणनाबाटै हराउन निर्देशन दिइएको रहेछ। उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन चाहेनछन्। मतगणनामा धाँधली नगरेकामा दरबार रिसाएपछि उनले राजीनामा गरेका रहेछन्। (यिनको कविता संग्रह झिल्को हो कि जस्तो लाग्छ त्यसको एउटा पंक्ति यस्तो छ - ' यी दरबार गरिबका रगत हुन् निर्धक्क कब्जा गरौँ ।' जयतु संस्कृतम् आन्दोलनका नायकमध्ये यी पनि हुन्।)
रामराजा त्यसपछि २०३६ को जनमत संग्रह ताका पनि देखा परेका थिए। कांग्रेसमा उनलाई खासै रुचाइँदैन थियो। हुन पनि सत्याग्रहको विफलताको मूल दोष रामराजाको बमकाण्डलाई नै जान्छ। त्यसमा उनको उद्देश्य के थियो हात कति थियो भन्ने रहस्य अहिलेसम्म चित्तबुझ्दोसँग प्रकट भने भएको छैन। रामराजा रहस्यमय राजनीतिकर्मी थिए तर राजतन्त्रको विरोध भने उनले सधैँ गरिरहे। अब उनी छैनन्। तैपनि, थाहा पाउनेहरूले सत्य लेखिदिए भने भविष्यमा शोधार्थीका लागि काम लाग्नेछ।
Posted by Govinda at 9/12/2012 10:31:00 AM No comments:
गएको साता अमेरिकाले नेपालको सत्तारुढ पार्टीलाई 'आतंककारी'को सूचीबाट हटायो। यस समाचारलाई नेपाल र विदेशमा पनि निकै महत्व दिइयो। अर्को समाचारअनुसार हत्याका एक जना अभियुक्तले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा आफू दिल्लीमा लुकेर बसेको बयान अदालतमा दिएका छन्। यो समाचार त्यसै हरायो।
पहिलो समाचारलाई सञ्चार माध्यमले महत्व र प्राथमिकता दिनु स्वाभाविकै हो। संसारकै शक्तिशाली मुलुक भनिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेकपा (माओवादी)लाई (एनेकपा (माओवादी) नै हो है!) आतंककारीको सूचीबाट जो हटायो। नेपाली जनताले संविधान सभाको चुनावमा सबैभन्दा धेरै स्थानमा जिताउँदा पनि माओवादीलाई 'चोख्याउन' हिच्किचाएको अमेरिकालाई बल्ल साइत जुरेछ। राम्रै भयो, कम्तीमा अब 'आतंककारीले शासन गरेको मुलुक' को कलंकबाट त मुक्ति पाइयो। हुन त, यसले नेपाली जनतालाई केही फरक पर्दैन। माओवादीकै पनि तल्ला तहका कार्यकर्तालाई यो निर्णय कागलाई बेल पाकेजस्तै हो। ठूला नेतालाई सायद फरक पर्ला। र त माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले 'निर्णयले माओवादी र अमेरिका सरकारबीच सहयोगको ढोका खोलेको' र 'अमेरिका र माओवादीबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुने' टिप्पणी गरेका होलान्। त्यसो त, नारायणकाजीहरूलाई कहिले पो फरक परेको थियो र?
माओवादी र अमेरिकी सम्बन्ध नराम्रोचाहिँ थिएन। विशेषगरी जेम्स एफ मोरियार्टी फर्काइएपछि अमेरिकीहरू माओवादीलाई रिझाउन लागेका थिए। युरोपेली त झन् माओवादीका प्रशंसकै छन्। बेलायतलगायत देशको सहयोगमा सञ्चालित थुप्रै परियोजनाबाट माओवादीलाई घुमाएर पैसा दिने गरिएकै हो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मागेजति पैसा दिन नपाउँदा युरोपेली कूटनीतिज्ञहरु बेलाबखत बिच्केका थिए। एकपटक लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्थाहरूको महासंघ (फेडेन)का प्रतिनिधिहरूसँग एउटा स्क्यान्डिनेभियाली मुलुकका राजदूतले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले 'माओवादीले मागे जति पैसा खुरुखुरु दिन नमानेको' मा असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। अनौपचारिक कुराकानीमा उनले व्यक्त गरेको त्यो 'असन्तुष्टि' युरोपेली मानसिकताको प्रतिनिधि अभिव्यक्ति हो। शीतयुद्धकालमा हुर्केका युरोपेली बुद्धिजीवीका लागि कम्युनिज्म सायद रोमाञ्चक आकर्षण बनेको थियो। लोकतन्त्र त उनीहरूले जन्मँदैमा पाएका थिए। हावा, पानी, घामजस्तै 'महत्वहीन' हो पश्चिमाहरूका लागि लोकतन्त्र र विधिको शासन। पछिल्ला दिनमा 'नाजीवाद' प्रति पनि युरोपमा आकर्षण बढ्दो छ।
अमेरिकाकै पनि संस्थापनसँग माओवादीको सम्बन्ध 'हार्दिक' थियो रे। उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार आतंककारीको पगरीले 'कूटनीतिक वृत्त' मा मात्र असजिलो भएको थियो। सन् २००३ मा आतंककारीको सूचीमा राखिएका माओवादीको 'अमेरिकी अधिकारीहरू' सँग रहेको 'हार्दिक' सम्बन्ध सम्भवतः सीआईएसँगै हुनुपर्छ। कारण, संसारका सबैजसो हिंसात्मक कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सीआईएको सम्बन्ध, संलग्नता र सक्रियता रहेको मानिन्छ। नेपालीजस्तो सहज समाजमा सीआईएको सञ्जाल पक्कै छ। माओवादी भारतीय गुप्तचर 'रअ' प्रति निष्ठावान भए पनि सीआईएको पहुँचबाट टाढा छैनन् नै होला। 'रअ' सँग माओवादीको निकट सम्बन्ध अब रहस्य रहेन। अमेरिकी विदेश विभागले माओवादी 'अहिले अमेरिकी नागरिक र अमेरिकी विदेश नीतिको सुरक्षाका लागि खतरा नभएकाले आतंककारी गतिविधिमा संलग्न नरहेको' घोषणा गरेको छ। अमेरिकाको संस्थापन पक्षलाई लाग्यो भने जो पनि जुन बेला पनि आतंककारी हुन पुग्छ। प्राकृतिक न्याय, कूटनीतिक मर्यादा, मानवीय कानुन वा अरू कुनै नैतिक भौतिक बन्धनले अमेरिकालाई छेक्दैन।
शक्तिशालीका लागि न्याय र नैतिकताको अर्थ सार्वभौम हुँदैन। अमेरिकाले जे मान्यो, अझ सीआईएले जे ठान्यो, त्यही सत्य! इराक र अफगानिस्तान यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्। इराकमा लडाइँ गर्न अमेरिकी जनमत तयार थिएन। आक्रमण गरिहाल्नुपर्ने कारण पनि थिएन। 'फ्याउरो र पाठाको कथा' सम्झाउने गरी 'आणविक हतियारको भण्डार' भएको निहुँ झिकियो। त्यति ठूलो विध्वंशपछि थाहा भयो- त्यो त निहुँमात्र रहेछ। यसैले अमेरिकाले औपचारिकरूपमा आतंककारी भन्नु वा नभन्नुको पनि कुनै अर्थ हुँदो रहेनछ। ( हो! माओवादी नेता आफ्नै खर्चमा पनि अमेरिका घुम्ने हैसियत राख्छन्। उनीहरूको पार्टी त झन् 'संसारकै धनी' भनेको हो क्यारे! अहिले मोहन वैद्यले अंशमा कति पाए? लिनु/दिनु के भयो? त्यो स्रोत खोल्न नमिलेजस्तै सार्वजनिकरूपमा बताउन पनि मिल्दैन होला! नागरिकको सूचना अधिकारमा पार्ने आँट त झन् कसरी गरिएला र? आईभीपीमा अब माओवादी अनुहार अलि धेरै देखिएलान् कि?) यो माओवादी नेताका लागि अमेरिकी संस्थापनासँग नजिकिने राम्रो मौका हुनसक्छ। संसारका धेरै सर्वसत्तावादी शासक अमेरिकी सहयोगमै टिकेका थिए । कम्बोडियाको खमेर रुजलाई समेत अमेरिकी सहयोग र समर्थन थियो। त्यति बेलाको अमेरिकी शासनका प्रमुख पात्रमध्येका हेनरी किसिंगरले आफ्नो पुस्तक 'अन चाइना' मा यसको विस्तारमा वर्णन गरेका छन्।
भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' का पूर्व कर्मचारी बी रमनले भने माओवादीले 'पश्चिमी स्वार्थ पूरा' गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। चल्लाले गुँढ छाड्ला भनेर पो चिन्ता बढेको हो कि? सिन्ह्वाले समाचार विश्लेषण भनेर अग्नि सापकोटाको भनाइ प्रचार गरेको छ। सिन्ह्वामा चीन सरकारको गन्ध आउँछ। (शीतयुद्धको पछिल्ला दिनमा यस्तै हुन्थ्यो। अमेरिका र चीनको एउटा धुरी थियो भने भारत र रुस एकातिर हुन्थे। भारतले अफगानिस्तानमा रुसी आक्रमणको समेत विरोध गरेन। बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनको चीन र अमेरिकाले चर्को विरोध गरे। )
अर्को समाचारचाहिँ अलि बेग्लै छ। त्यसैले नेपाली सञ्चार माध्यममा खासै ठाउँ नपाएको हुनसक्छ। वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेका नाममा इन्डियन एक्सप्रेसको अनलाइन संस्करणमा शनिबार प्रकाशित समाचारअनुसार, ओखलढुंगाका माओवादी नेता नवराज बस्नेतले गएको बुधबार जिल्ला अदालतमा दिएको बयानमा आफू बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा दिल्लीमा लुकेर बसेको बताएका छन्। बस्नेतका अनुसार शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि गोपाल किराँती र बालकृष्ण ढुंगेलले छवि कार्कीलाई मार्न भनेका थिए। बस्नेतलाई प्रहरीले हत्याको अभियोगमा खोजतलास गरिरहेको थियो। प्रचलित कानुनअनुसार हत्याका अभियुक्तलाई भगाउन वा थाहा भएर पनि लुकाउने व्यक्तिमाथि अपराधीको मतियारका रूपमा फौजदारी अभियोग लाग्छ। हुन त, नवराज बस्नेतकै बयानका भरमा गोपाल किराँती वा बाबुराम भट्टराईलाई अपराधीको मतियार भनिहाल्न नमिल्ला तर नेपालको कानुनअनुसार ज्यान मुद्दामा तानिएपछि अदालतसम्म त पुग्नैपर्छ क्यारे! (यस्ता 'बुर्जुवा' कानुनमा क्रान्तिकारीहरूको विश्वास नहुनुचाहिँ बेग्लै हो।)
यो कानुनको शासनको उपहास भए पनि प्रमुख विपक्षी भनिएको नेपाली कांग्रेसलगायत् राजनीतिक दलहरूलाई भने यसमा चासो देखिएन। उधारो प्रधानमन्त्री हुनैमा उनीहरू रल्लिइरहेका छन्। नागरिक समाजका नाममा बेलाबखत तमासा देखाउनेले यस्ता विषयमा खासै चासो राख्दैनन्। नेपाल बार एसोसियसन वा यस्तै अरू संस्था छन्। तर, ती किन छन् भन्ने सायद तिनकै पदाधिकारीलाई समेत थाहा छैन। यसरी पनि मुलुक नचल्ने त हैन तर लोकतन्त्रचाहिँ बाँच्न सत्तै्कन। नेपालीलाई लोकतन्त्र नचाहिएकै हो भने त्यही बाटो लागे हुन्छ। 'मिलीजुली बसौँ, बाँडीचुँडी खाऔँ' भन्ने पञ्चायती नारा दोहोर्‍याए हुन्छ। एउटा मियो अर्थात् सक्रिय नेतृत्व दिने अधिनायक चाहिने न हो। राजा नभएर के भयो र जसलाई खडा गरे पनि हुन्छ। नेपाली सेनालगायत संस्थापनले सामन्ती चरित्र र अभ्यासलाई निरन्तरता दिएकै छन्। अब पनि त्यसमा सहयोग गरी जो हाल्छन्। हैन! लोकतन्त्र त चाहिने हो भने सधैँ चाहिँ यसरी चल्दैन। अपराधी र शासकको कित्ता एउटै हुन जो सक्त्तैन।
Posted by Govinda at 9/11/2012 12:40:00 PM No comments:
Posted by Govinda at 9/11/2012 12:05:00 PM No comments:
अभिनवलाई पिज्जा खान मन लाग्यो । दिदी हंसिकाले टर्ममा राम्रो गरेकाले ट्रिट मागिन् । अभिज्ञ दादा रेस्टुराँमा नगएको धेरै दिन भएको थियो । अनि हामी बसुन्धराको एउटा रेस्टुराँमा गयौँ शनिबार । रमाइलो भयो । दीपु, अवानी र आरुष पनि भए झन् कति रमाइलो हुन्थ्यो होला !
Posted by Govinda at 9/10/2012 05:51:00 PM No comments:
Posted by Govinda at 9/10/2012 03:36:00 PM No comments:
Posted by Govinda at 9/09/2012 03:55:00 PM No comments:
Posted by Govinda at 9/08/2012 10:32:00 AM No comments:
नाम र दाम कमाउने रहर त थियो होला तर कुन्नि किन त्यो बाटै लागिएनछ । पैसा कमाउन नसक्ने व्यक्तिको परिवारमा खासै अर्थ नहुनु अस्वाभाविक हैन । नाम कमाउन नसकेको मान्छेलाई समाजले सम्झने कारणै हुँदैन। विलास के हो थाहै भएन । उमेर छँदा पनि विलासको पछि लागिएन । उमेर ढल्केपछि विलास कतिपय अर्थमा त उपहास हुनपुग्दो रहेछ ।
पैसा कमाएर कम्तीमा परिवारमा महत्व स्थापित गर्न अब न समय छ, न कमाउने सीप । न त्यसका लागि परिश्रम गर्न आवश्यक शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक क्षमतै छ । नाम कमाउन पनि अब थालेको प्रयासले पुग्दैन। आफूसँग समाजलाई दिनसक्ने केही छैन । भोगविलास त शरीरले धान्नै सत्तै्कन। न मन लागेको खानै हुन्छ न मन लागेका ठाउँमा जानै सकिन्छ । शरीरका कतिपय आवश्यकता त झन् त्यसै हराएर जाने रहेछन् ।
जीवनको यस अर्थहीनतासँग कसरी तालमेल मिलाउने? बाँच्ने कला नजानेर पो यसो भएको हो कि? कतै सिक्न सकिएला बाँच्ने कला ?
Posted by Govinda at 9/08/2012 09:15:00 AM No comments:
पाकिस्तानको अदालतमा एउटा विचित्रको मुद्दा चलिरहेको छ । एक जना अपेक्षाकृत सुस्त मनःस्थितिकी १४ वर्षीया बालिकाले इस्लामावादमा खाना पकाउन कागज बाल्ने क्रममा कुरानका केही पाना पनि बालिन् रे । संयोगले ती बालिका इसाई परिवारमा जन्मेकी रहिछन् । उनले कुरानका पाना बालेको कसैले देखेको नभए पनि पाकिस्तानको अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । ती बालिकालाई वयस्क बन्दीसँगै झ्यालखानामा राखिएको छ । सीएनएनको अनलाइन संस्करणअनुसार यो मुद्दा सुरु भएपछि त्यहाँको इसाई समुदाय त्रस्त बनेको छ र कतिले घरबार छाडेर सुरक्षित ठाउँमा आश्रय लिएका छन् ।
कम्तीमा पनि ती बालिकालाई जमानीमा छाडेर परिवारमा फर्कन दिइयोस् भन्ने उनको वकिलको मागमा पाकिस्तानको एउटा अदालतले शनिबार निर्णय गरेन । उनलाई जमानीमा छाड्ने आदेश दिन पनि अदालतलाई सजिलो छैन। त्रु्कद्ध मुसलमान समुदायले रिस फेर्लान् कि भन्ने डर छ । प्रहरीका अनुसार ती बालिका निरक्षर छिन्। उनलाई पोलिएका कागजमा कुरानका पाना भए नभएको थाहै थिएन रे ।
यसलाई सीएनएनले मुसलमानले इसाईमाथि गरेको अत्याचारका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको भान हुन्छ। यस्ता मानवीय संवेदना भएका विषयलाई मानवीय आँखाले मात्र हेर्न सकिँदैन?
पाकिस्तानी कानुन र त्यहाँको समाज यो मध्य युगीन बर्बबरताबाट कहिले मुक्त होला ? अक्षरै नचिनेकी बालिकाले जानीजानी त पक्कै कुरानका पाना पोलेकी हैनन् । अज्ञानमा भएको गल्तीमा यति चर्को सजाय त्यै पनि धर्मका नाममा ? यो मुद्दै अधार्मिक भएन ?
पाकिस्तानमा धर्मका नाममा भएको अधर्मको खेलले नयाँ रूप लिएर ।कुरानका पाना पोलेको अभियोगमा बालिकालाई २ साता थुनामा राखिएपछि प्रहरीले आज एक जना मुसलमान इमामलाई पक्रेको छ । खालिद चिस्ती नाम गरेका इमामले नै ती सुस्त मन:स्थितिकी केटीको झोलामा कुरानका पोलिएका पाना हालिदिएका बयान एक जना देखिजान्ने साक्षीले दिएको बीबीसीको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार उल्लेख छ ।
पाकिस्तानमा धर्म द्रोह गम्भीर अपराध मानिन्छ । वैरी साध्न पनि यस ऐनको दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।
Posted by Govinda at 9/01/2012 04:16:00 PM No comments: